Wararka ugu hadalhaynta badan Siyaasada Ethiopia iyo Xaalada Dalka ee Maanta. - Ogaden24 | Ogaden24
Jul 19, 2020 - Comments off
Labba qof oo kamida dibad baxayaashi Washington iskugusoo baxay ayaa xalay la toogtay oo la dhaawacay,Booliska ayaa sheegay innay baadhitaan waddaan.
Xoghayaha dhanka saxaafada ee xafiiska Raysal wasaaraha Itoobiya,Niguse Tilahun ayaa sheegay innay xaalada dalku degantahay islamarkaana lagu guulaystay in sharciga la horkeeno dadkii rabshadaha wadday.
Hay’adda xuquuqaha aadamiga udooda ee Amnesty International ayaa ku baaqday in xaalada siyaasiyinta xidhan Itoobiya shaaciso,warbixin ay soo saareen ayay ku sheegeen in mid kamida hogaamintii xisbiga OFC oo xidhan aanan maxkamad la keenin illaa hadda.
Dhanka kale hay’adda xuquuqaha aadamiga udooda ee Human Right Watch ayaa ka hadashay xaalada cakiran ee dalka Itoobiya.
Xeer-ilaalinta Itoobiya oo maanta war saxaafadeef soo saartay ayaa iska difaacday, eedaymaha hay’addaha xuquuqul insaanka ee Amnesty International usoo jeedisay,waxayna ku tilmaameen kuwo dhinac ka raran, oo ka fog xaqiiqada.
Dibad baxyadii xukuumada Abiye Ahmed lagu taagerayay oo ay hor kacayaan Axmaaradu ayaa dalka dibadiisa ka socda.
Qowmiyada Oromada ayaa dhankooda siiwada isusoobaxyada lagaga soo horjeedo xukuumada Abiye Ahmed.
Meelo dalka German-ka kamida ayay labbada banaan-bax ee iskasoo horjeeda kawadda dhaceen siddii shalay.(Mid Axmaaro waddo iyo midkii Oromada)
Raysal wasaaraha dalka Itoobiya,Abiye Ahmed ayaa gaadhay dalka Eretrea waxayna kulmeen Esasiyas Afwork oo ay ka arrisadeen xaalada geeska iyo amniga gobalka sidda lagu sheegay war kasoo baxay Eretrea.
Wasaarada caafimadka dalka Itoobiya ayaa sheegay in tirada caabuqa safmareenka laga helay ay gaadhay sagaal kun shan boqol iyo saddex qof(9,503). Dhimashada guud ee caabuqa ayaa maanta gaadhay 167-qof.
Heerarka kala gadisan ee maamulka Deeganka Soomalidana ayay wali usocotaa qiimayn lagu samaynayo geedi socodka addeeg bixineed.